ကျွဲဆည်ကန် ကားကြီးကွင်းဟောင်း / ဒီလှိုင်းဝင်း / ဧရာဝတီ
By ဒီလှိုင်းဝင်း 29 September 2019
မန္တလေးခရိုင်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ချမ်းမြရွှေပြည် (ကျွဲဆည်ကန်) ယာယီကားကြီးကွင်း တည်ဆောက်နေမှု ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဦးရဲမွန်က ပြောသည်။
ကျွဲဆည်ကန် ကားကြီးကွင်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ခရီးသွားပြည်သူများ အခက်အခဲမရှိ သွားလာနိုင်ရန် အတွက် ယာယီယာဉ်ရပ်နားစခန်း တခုထားရှိ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဦးရဲမွန် က “ချမ်းမြရေ့ွှပြည် ကားကွင်းကို မကြာခင်မှာပဲ ရွေ့ပြောင်းဖို့ရှိပါတယ်၊ ယာယီကားကွင်းတည်ဆောက်တာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးပါပြီ၊ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ဒီလထဲမှာပဲ ကျွဲဆည်ကန် ယာယီကားကွင်း တည်ဆောက်တာ အလုံးစုံပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကျွဲဆည်ကန် ကားကြီးကွင်းအဆင့်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd (mDCM) ကုမ္ပဏီက တင်ဒါ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၂၀၁၅ ခုနှစ်က စတင်လုပ်ဆောင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း တည်ဆောက်မည့်ဒီဇိုင်ပါ ၁၂ ထပ်အဆောက်အဦသည် ချမ်းမြသာစည် လေယာဉ်ကွင်း၏ လေယာဉ်ပြေးလမ်းကြောင်းဖြင့် မလွတ်ခြင်းကြောင့် မူလရေး ဆွဲထားသည့်ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲနေရသဖြင့် တည်ဆောက်ရေးအပိုင်း ကြန့်ကြာနေရခြင်းဟု သိရသည်။
ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကွင်းကို အဆင့်မြှင်တင်တည်ဆောက်နိုင်ရန် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd. တို့အကြား လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
ကျွဲဆည်ကန် ကားကြီးကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ လုပ်နေစဉ် ခရီးသွားပြည်သူများ အခက်အခဲမရှိ သွားလာနိုင်ရန်အတွက် ယာယီယာဉ်ရပ်နားစခန်းတစ်ခုထားရှိဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd မှ ယာယီကားကွင်းကိုပါ တည်ဆောက်ပေးခြင်းဟု သိရသည်။
အဆိုပါယာယီကားကွင်းသို့ ချမ်းမြရွှေပြည် (ကျွဲဆည်ကန်)ရှိ ဂိတ်ခန်း၊ ဆိုင်ခန်း၊ ယာဉ်အသင်းများကို ပြောင်းရွေ့ ပေးရန် စီစဉ်နေရာ ဂိတ်ခန်း၊ ဆိုင်ခန်း၊ ယာဉ်အသင်းများအနေဖြင့် ယာယီကားကွင်းသို့ မပြောင်းရွှေ့လိုဟု ဆိုသည်။
ရွှေမြန်မာ ကားဂိတ်မှ ဦးကျော်ဆန်းဦးက “ကားကွင်းကို အဆင့်မြှင့်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ဂိတ်တွေအတွက် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ မြေညီထပ်ကိုပဲ ပြန်လိုချင်တယ်၊ နောက်ပြီး အဆင်မြှင့်ပြီးပြီဆိုရင် ကုမ္ပဏီ လက်အောက်ကို ရောက်မှာ သေချာသလောက် ရှိနေပြီဆိုတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာလည်း ဆိုးတယ်၊ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မပြောင်းရွေ့ချင်ပါဘူး” ပြောသည်။
အဆိုပါယာယီကားကွင်းအသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့ရန်အတွက် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် လက်ရှိကားကွင်းရှိ ဂိတ်ခန်းပိုင်ရှင်များ၊ ကားသင်းပိုင်ရှင်များ၊ ဈေးဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များဖြင့် ညှိနှိုင်းမှုများ လုပ်ဆောင် နေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဦးရဲမွန် က “လက်ရှိမှာတော့ ယာယီကားကြီးကွင်းအသစ်ကို ရွေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဂိတ်ခန်းပိုင်ရှင်တွေ၊ ကားသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်၊ ညှိနှိုင်းတယ်ဆိုရာမှာလည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ သူတို့ကို ယာယီကားကြီးကွင်းကို လိုက်ပြပြီးတော့ ဘယ်နေရာမှ ကားပါကင်ထိုးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာတော့ Taxi တွေအတွက် စီစဉ်ထားတယ်၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေ သိုလှောင်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေ၊ ဂိတ်ခန်းတွေ၊ စားသောက်ကုန်စတာတွေကိုလည်း ဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကို လိုက်ပြမယ်၊ အဲဒီလိုပြသပြီးတော့ ရွေ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရွေ့ပြောင်းနိုင်အောင် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် လက်ရှိကားကွင်းမှ ယာယီကားကွင်းသို့ ရွေ့ပြောင်းပေးရာတွင် စနစ်တကျ ပြန်လည်နေရာချထားပေးနိုင်ရေးအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မဲစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သလို လက်ရှိကားကွင်းတွင် ဆိုက်ရောက်၊ ထွက်ခွာ နေရာများ မပါရှိဘဲ ယာယီကားကွင်း အသစ်တွင် ဆိုက်ရောက်၊ ထွက်ခွာ နေရာများ ပါရှိလာခြင်းကြောင့် စနစ်ကျသော ကားကွင်းဖြစ်လာမည်ဟု သိရသည်။
မန်းရွှေမြို့တော်အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်အသင်းမှ ဦးသန့်ဇင်က “ကားကွင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ပြောတာ ၂ နှစ်ကျော်ပါပြီ၊ ယာယီကားကွင်း စီစဉ်ပေးထားပြီးမှ ကားကွင်းအဆင့်မြှင့်တဲ့အတွက် ယာဉ်လိုင်းတွေအနေနဲ့ ထိ ခိုက်နစ်နာသွားတာမျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး၊ ကားကွင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်သင့်နေတာ ကြာပါပြီ၊ အဆင့်မြှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံး အတွက် အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခုဆိုပေမယ့် ယာယီကွင်းနေရာဟာ လက်ရှိကွင်းလောက် မကျယ်တော့ ကျနော်တို့ အားလုံးအတွက် သွားရေးလာရေးနဲ့ နေရေးတွေအတွက်တော့ အဆင်မပြေနိုင်လောက်ဘူး” ဟု ပြော သည်။
ကားကွင်း အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းကို တင်ဒါအောင်သည့်ကုမ္ပဏီမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝ ရင်းနှီးတည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကာ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က မြေငှားရမ်းအသုံးပြုခ ကျပ် ၂ ဘီလီယံ ပေးသွင်းခဲ့ပြီး BOT စနစ်ဖြင့် ကနဦး နှစ် (၅၀) လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ တနှစ်လျှင် ကျပ်သိန်း ၃ သောင်းပေးသွင်းရသည်ဟု မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေး ကော်မတီနှင့် m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd. ၏ သဘောတူစာချုပ်အရ သိရသည်။
mDCM ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတဦးက “လေယာဉ်ကွင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံအတိုင်း ကားတွေ ဆိုက်ရမယ့်နေရာ၊ ခရီးသည်ချမယ့် နေရာ၊ ခရီးသည်တွေ တက်စီးနိုင် မယ့်နေရာ စတဲ့ပုံစံ မျိုးနဲ့လုပ်သွားမယ်၊ လက်ရှိ အနေအထားအရ ဂိတ်ရှေ့မှာ ကားရပ်၊ ဂိတ်မှာလက်မှတ် ဝယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ တချိန်တည်းမှာ ကားဘယ်လောက် ထွက်နိုင်မလဲပေါ် မူတည်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမယ်၊ ခရီးသည်တွေအတွက် ကားစောင့်နေရင်းနဲ့ သက်သောင့်သက်သာ နေနိုင်အောင် လုပ်ထားပေးမယ်။ အဓိကတော့ ခရီးသွားတွေ အဆင့်မြင့်မြင့် သက်သောင့်သက်သာ နေလို့ရအောင် စီမံပေးမယ်” ဟု ပြောသည်။
ချမ်းမြရွှေပြည် အဝေးပြေးကားကွင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် လေးထပ်ခွဲ၊ ငါးထပ်အမြင့် အဆောက် အဦများနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ဆိုက်ရောက်ရာ နေရာ၊ ထွက်ခွာရာနေရာ၊ ခရီးသည်များ နားနေခန်းနှင့် အချက်အလက်များ ပြန်ကြားရေးဌာန၊ ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်ခန်းများ၊ လက်မှတ်အရောင်းကောင်တာများ၊ တက္ကစီဂိတ်နှင့် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ၊ စူပါမားကတ်၊ ရှောပင်းမောလ်၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကွန်ဒို၊ ဟိုတယ် အစရှိသည်များပါဝင်မည်ဟု သိရသည်။
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း၌ အဝေးပြေးခရီးသည်တင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ၅ ခုရှိသည့်အနက် သက်တမ်း နှစ်၂၀ ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်သည့် ချမ်းမြရွှေပြည် အဝေးပြေးကာကွင်းအား ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီး စတင်စဉ်က ခရီး သည်တင်ယာဉ်လိုင်းများအပြင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲရုံများ၊ ဂိုထောင်များပါရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲရုံများ၊ ဂိုထောင်များကို လက်ရှိကုန်စည်အဝေးပြေးကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ချမ်းမြရွှေပြည်အဝေးပြေးကားကွင်းတွင် အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်အသင်းပေါင်း ၉၆ သင်းရှိပြီး မော်တော်ယာဉ် အစီးရေ ၆၅၆ စီးဖြင့် ပေးဆွဲပေးနေကာ နေ့စဉ် အဝင်အထွက် ၅၀၀ စီး ရှိကြောင်း၊ အပြီးရောင်းချပြီး ဂိတ် ၂၁၃ ဂိတ်နှင့် မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ဂိတ် ၄၂ ဂိတ် စုစုပေါင်း ၂၅၅ ဂိတ်၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ၁၀၀ ရှိကြောင်း၊ နေ့စဉ် ခရီးသွား ၄၈၀ဝ ကျော်ရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနရှိ စာရင်းများအရ သိရသည်။
Topics: ကားကြီးကွင်း, ကျွဲဆည်ကန်, မန္တလေး